All Categories Art & Handicrafts Beauty Business Electronics Events Find Friends Dates Travel Furniture Holiday Guest House Hotel & Resort Other Travel & Tours Jewelry Jobs Motors Boats & Yachts Car for Rent Car for Sale Motorcycles Parts & Accessories Other Overseas Real Estate Condo for Rent Condo for Sale House for rent House for Sale Land Outside Burma Projects Services Want to Buy Want to Rent
Home » Services » Petunity
Street: Inya Road
Listed: November 24, 2017 1:58 pm
Petunity is Myanmar’s first premium platform for the country’s pet owner community, offering healthcare services and convenient online market for the pet food and accessories. Plus it’saplatform for pet lovers to make friends and share experiences. By merging our passion and vision, we are working our hardest to serve asasustainable catalyst in Myanmar’s Digital Transformation.
Visit us @petunity.net
Petunity ဆိုတာ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျလေးတှေ မှေးထားသူတှအေတှကျ အဓိကရညျရှယျတဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဝနျဆောငျမှုပေးတဲ့နရောတဈခုပါ။ သူတို့လေးတှအေတှကျ ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ အကွံဉာဏျတှေ ရရှိနိုငျမယျ့အပွငျ သူတို့အတှကျအစားအစာတှေ၊ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးလေးတှကေိုလညျး အှနျလိုငျးကနအေဆငျပွခြေောမှစှေ့ာ ဝယျယူနိုငျဦးမှာပါ။ ဒါတငျမကသေးပါဘူး။ တိရစ်ဆာနျခဈြသူအခငျြးခငျြး မိတျဆှဖှေဲ့ပွီး အတှအေ့ကွုံတှေ၊ အကွံဉာဏျတှေ မြှဝဖေို့အတှကျလညျး Petunity ကို အသုံးပွုနိုငျပါသေးတယျ။
မွနျမာ့ဒီဂဈြတယျအသှငျကူးပွောငျးရေးမှာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပွငျးပွတဲ့စတေနာနဲ့ ရညျမှနျးခကျြကို ပေါငျးစပျပွီး တဈထောငျ့တဈနရောကနေ ရရှေညျပါဝငျဆောငျရှကျသှားဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးကွိုးစားဆောငျရှကျနပေါတယျ
Petunity ဆိုတာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ မွေးထားသူတွေအတွက် အဓိကရည်ရွယ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ သူတို့လေးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ ရရှိနိုင်မယ့်အပြင် သူတို့အတွက်အစားအစာတွေ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်း အွန်လိုင်းကနေအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဝယ်ယူနိုင်ဦးမှာပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်ချစ်သူအချင်းချင်း မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီး အတွေ့အကြုံတွေ၊ အကြံဉာဏ်တွေ မျှဝေဖို့အတွက်လည်း Petunity ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
မြန်မာ့ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြင်းပြတဲ့စေတနာနဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ပေါင်းစပ်ပြီး တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ရေရှည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်
Listing ID: 3965a1799c1ca747
Listed by: Petunity
Other items listed by Petunity
Latest items listed by Petunity »
© 2017 BurmaFinder.com. All Rights Reserved.